Cunto - Wikipedia
Bogani wuxuu ka hadlayaa guud ahaan cuntada. Boga "Raashin" waxaa laga soo toosiyay halkan.
Astaanta caalamiga ah ee cuntada
Noocyo badan oo kalad duwan oo cuntada ka mid ah.
Cuntada laga helo dhirta.
Cunto, Raashin (Af-Carabi: طعام; Af-Ingiriis: food) waa shay kasta oo la quuto si looga helo nafaqo iyo awood jidhka nooluhu u baahan yahay si uu u sii noolado. Cuntadu waa walax nooluhu quutaan taasi oo unugyada jidhka siisa tamar ay ku shaqeeyaan. Sida caadi ah cuntada waxaa laga helaa dhirta ama xayawaanka (ama labadoodaba); waxayna ka kooban tahay nafaqo, sida duxda (baruur), borotiin, fiitamiin, macdano iyo noocyo kale oo nafaqo ah kuwaasi oo taageera isla markaana tamar uu ku socdo siiya xubnaha jidhka. Walxaha cuntada waxa inta ugu badan laga qaataa afka waxayna tegtaa caloosha halkaasi oo unugyada jidhku u sii kala jebiyaan walxo yaryar, isla markaana loo isticmaalo awood ahaan, si noloshu u sii jirto.
Sida badan, cuntada waxaa laga helaa khayraadka dabiiciga ah ee oogada dhulka, taas oo inta ugu badan ka timaada midhaha iyo xubnaha kala duwan ee dhirta. Sidoo kale, cuntada waxaa keenaa jidhka noole kale. Sida taariikhdu xustay, wakhtiyadii hore dadku waxay cuntada ku heli jireen ugaadhsi iyo qadhaabsi, maantase waxaa taas sadexeeysay waa wax-beerasho.
Amniga iyo nadaafada cuntada waxaa dabagal ku sameeya hay'adaha eey ka mid yihiin International Association for Food Protection, World Resources Institute, Programma Alimentare Mondiale, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, iyo International Food Information Council, kuwaas oo wax ka sheega helitaanka cuntada, nafaqada cuntada, noocyada cuntada, koritaanka bulshooyinka, dhaqaalaha & cuntada iyo helitaanka biyaha. Dunida maanta waxaa la isku afgartey in dhamaan aadamuhu xaq u leeyahay helitaanka cuntada iyo cabitaanka biyo.
1 Ilaha Cuntada
3 Wakhtiyada Cuntada
3.4 Wakhtiyo Kale
Hilibku wuxuu ka mid yahay cuntada dadka
Guud ahaan cuntadu waxay ku tiirsan tahay dhirta. Cuntada dadku isticmaalaan inta ugu badan waxay si toos ah uga timaadaa dhirta; sidoo kale cuntada ka timaada xayawaanka waxay iyadna si toos ah ugu tiirsan tahay jiritaanka iyo helitaanka dhirta. Sababto ah hadii xooluhu daaqsimo waayaan ma taageerayaan cunto iney u noqdaan dadka. Midhaha firileyda (sida bariiska, galleyda, heeda, qamadiga iwm) waa kuwa ugu badan ee quudiya shacabka caalamka. Galleyda, qamadiga iyo bariiska oo kali ah waxay noqdaan 87% cuntada firileyda ee dunida laga isticmaalo. Sidoo kale cuntada firileyda ah waxaa toos ugu tiirsan nolosha xoolaha la dhaqdo ee quudka laga helo.
Waxaa jira xooga yar oo cunto ah oo iyadana laga helo fungiga, waxaa ka mid ah geedka mushroomka loo yaqaano. Fungida iyo nooc ka mid ah bakteriyada waxay suurto-geliyaan in noocyo ka mid ah cuntada la khamiiriyo si loo helo waxyaalaha ay ka midka tahay yiistida, rootida, canjeerada, khamriga, jiista, kombuujaha iyo yogurtka.
Sida caadiga ah in badan oo qeybaha dhirta ah ayaa dadku cunaan; kaga biloow midhaha, caleemaha, jirida, laamaha iyo xididada. Waxaa dadku beertaan ilaa 2,000 oo nooc oo dhir ah, kuwaasi oo dhamaantood loo isticmaalo cunto ahaan kaliya. Firida dhirtu waa tan ugu badan ee dadka iyo xayawaanku quutaan, sababtoo ah waxay leedahay nafaqo aad u badan oo muhiim u ah jiritaanka, koritaanka iyo caafimaadka noolaha. Nafaqooyinkaasi waxaa ka mid ah duxda omega, fiitamiino, borotiino, kaarboonhaydarate iyo kuwo kale oo badan.
Cuntada laga helo dhirta iyo xayawaanka waxay ka kooban tahay nafaqo, sida dux, fiitamiino, kaarboonhaydaraytis, borotiin iyo macdano kala duwan oo jidhu u baahan yahay.
Cuntada waxaa laga qaataa afka, waxay sii dhexmarkaa hunguriga ama dhuunta ilaa caloosha oo burburisa eey ka gaadho, ka dib ku darta qulqulka dhiiga oo gaadhsiiya unugyada jidhka.
Quraac, Qureec (Af-Ingiriis: breakfast; Af-Carabi: إفطار) waa cuntada ugu horeeysa ee dadku cunaan aroortii marka laga soo tooso hurdada. Sida caadiga ah, quraacdu waa raashinka aroorti dadku cunaan. In kastoo dadku ku kala duwan yihiin wakhtiyada iyo nooca cunto ay ku quraacdaan. Guud ahaan dadku waxay quraacdaan qorax soo baxa aroortii ilaa laga gaadho qiyaastii 10ka subaxnimo, mararka qaar la gaadhsiiyo ilaa 11ka subaxnimo. Habeenkii marka dadku seexdaan waxay qaataan saacado badan oo bilaa cunto ah, markaas quraacu waa cuntada koowaad ee dadku ku bilaabaan markay soo toosaan taasi oo ku xidhan wakhtiga qof kasta ka tooso hurdada. Hadaba waxaa jira dadka qaar aan waxba cunin saacado badan xataa aya oon waxba ku mashquul ahayn.
Qado (Af-Ingiriis: lunch; Af-Carabi: غداء) waa cuntada la cuno badhtamaha maalinta taasi oo ka kooban noocyo badan oo raashin ah. Marka la tixraaco dhaqanka dadka Soomaalida, qadadu waa cuntada ugu muhiimsan sadexda wakhti ee dadku wax cuno. Wakhtigani waxaa inta badan dadku cunaan cuntada ugu culus, badan ee ugu fiican ee la heli karo. Cuntada qadada Soomaalida waxaa ka mid ah: hilib, kaluun, bariis, baasto, khudaar, midho, maraq iyo noocyo kale. Si taasi ka duwan taasi meelo badan oo caalamka ah qadadu muhiim uma aha sida cashada wakhtigaasi oo la cuno raashinka ugu fiican ee la heli karo.
Guud ahaan, qadadu waa cuntada labaad ee dadku cunaan maalintii (waxay ku xigtaa quraaca); waxaana inta ugu badan la isticmaalaa wakhtiga duhurkii ee 12ka P.M wixii ka dambeeya.
Casho (Af-Ingiriis: dinner; Af-Carabi: عشاء) waa cuntada sadexaad ee dadku cunaan habeenkii ka hor intaanay seexan. Sida caadiga ah cashadu waa cuntada ka dambeysa qadada taasi oo dadku cunaan wakhtiga ka dambeeya qorax dhaca ilaa habeen badhka. Wadanada qaar waxaa caan ah in dadku casheeyaan 5ta galabnimo, ka hor intaanay qoraxdu dhicin, taasi oo dhakhaatiirta iyo cunto yaqaanadu ku sharaxeen ineey tahay mid u fiican caafimaadka. Wadanka Soomaaliya iyo guud ahaan dadka Soomaalidu waxay inta ugu badan casheeyaan salaada cishaa'i wixii ka dambeeya. Sidoo kale, cuntooyinka ugu caansan ee dadka Soomaaliyeed ku casheeyaan waxaa ka mid ah: canjeerada, rootida, sabaayada, malawax, baastda, fadiirada, garowga, digirta, cambuulada, qamadiga, misirka, khudaar, midhaha iyo noocyo badan oo halkan lagu soo koobi karin.
Deegaano badan oo caalamka ah cashadu waa cuntada ugu muhiimsan maalinta oo dhan, taasi oo dadku isticmalaan raashinka ugu muhiimsan ee la heli karo. Sidoo kale, cashadu waxaa lagu fasiri karaa micnayaal badan taasi oo ku xidhan dhaqanka iyo deegaanka.
Cuwaaf (Af-Ingiriis: snack) waa nooc kasta oo cuntada u dhaxaysa sadexda wakhti ee wax la cuno taasi oo inta badan ah cunto fudud. Cuwaaftu waxay noqon karta cunto aad u fudud oo la iskaga reebo gaajada isla markaana lagu sugo wakhtiga cuntada. Sidoo kale waxaa cuwaaf noqon karta cuntooyinka degdega ah ee lagu soo dhaweeyo marti ama loo isticmaalo raaxaysi iyo baashaal.
Deegaano badan oo ka mid ah dhulka Soomaalida waxaa caan ka ah shaaha la cabo galabtii ee loo yaqaano Shaadaliga, kaasi oo laftiisu ka mid ah cuwaafta. Sidoo kale, meelo badan oo Waqooyiga Soomaaliya ka mid ah waxaa caan ku ah cuntada qadada wixii ka soo hadhay in dib loo cuno wakhtiga galabtii ka hor intaanay qoraxdu dhicin taasi oo loo yaqaano cuwaaf.
Wadanada reer galbeedku aad ayay u isticmaalaan cuwaafta, waxaana dhakhtarku dadka in badan ku dhiiri geliyaa in la cuno cuwaafta fudud dhowrkii saacadood hal mar wakhtiga maalinta oo dhan. Waxaa sidoo kale aad wadanada reer galbeedka looga isticmaalaa midhaha khudaarta, buskudka, cabitaanka, cunto fudud iyo jibsiga kuwaasi oo loo dhaxaysiiyo wakhtiyada cuntada muhiimka ah.
In kastoo ay kala duwan tahay nooca iyo xajmiga cuwaaftu guud ahaan waa cunto u dhaxaysa wakhtiyada rasmiga ah ee la raashimiyo. Sidoo kale waa cunto ka fudud cuntooyinka sadexda ah ee la cuno maalintii iyo habeenkii. Waxaanay ka koobnaan kartaa macmacaan sida buskud, xalwad, keeg, rooti, shaah, bun; dhandhanaa sida baagiye, qureebaad, shigni, basbaas, hambeegur iyo wixii la mid ah. Dhakhaatiirtu aad ayay u dhiirigeliyaan cuwaafta, waxayna ku sheegtaa ineey jidhka ka ilaaliso xanuuno ay ka mid tahay macaanka iyo dhiig-karka.
Shaadali sidoo kale loo yaqaano casariye waa shaaha dadku cabaan wakhtiga galabtii.
↑ "food". Encyclopedia Britannica. Retrieved 29 May 2015.
↑ "ProdSTAT". FAOSTAT. Retrieved 2008. Check date values in: |access-date= (help)
↑ "Are apple cores poisonous?". The Naked Scientists, University of Cambridge. 26 Sep 2010. Retrieved 12 May 2014.
↑ "breakfast - definition of breakfast by the Free Online Dictionary, Thesaurus and Encyclopedia". Thefreedictionary.com. Retrieved 28 March 2012.
Waxaa laga keenay "https://so.bywiki.com/w/index.php?title=Cunto&oldid=157351"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 07:20, 29 May 2016.